Ukhala ngesikhebe ahhoyizelwa kusona uNxele - Bayede News
Home » Ukhala ngesikhebe ahhoyizelwa kusona uNxele
Ukhala ngesikhebe ahhoyizelwa kusona uNxele
Olwezindlu luhlukanisa phakathi iLamontville
Sisola itulo lokusiketula isikhulu samajele KwaZulu-Natal, uMnu uMnikelwa Nxele, esibhekene ngeziqu zamehlo neNhloko yoMnyango Wezokuhlunyeleliswa Kwezimilo kuzwelonke uMnu u-Arthur Fraser.
UNxele wamiswa emsebenzini ngowezi-2017 emuva kokumisa esinye isikhulu ngaphandle lapho asolwa ngokungalandeli imigudu efanele. Kulokhu walinqoba icala enkantolo. Uphinde wamiswa ngowezi-2018 waphinde wabuyiswa emveni kwezinyanga ezintathu emva kombiko wePublic Service Commission. Usephinde wamiswa nguKhomishana wezamajele kuzwelonke uMnu u-Arthur Fraser ngezinsolo zokuthi uNxele nekomiti lakhe bathatha izinqumo bengayilandelanga inqubomgomo ebekiwe.
Nakuba umlamuli wezezisebenzi anika uNxele imvume yokubuyela emsebenzini emva kokumiswa, kepha ngeledlule uvinjwe ngonogada abebehlomile ukuba angene ehhovisi lakhe eliseMgungundlovu bethi banikwe umyalelo uFraser ophikisana nokubuyiselwa kukaNxele emsebenzini.
Engxoxweni ekhethekile nelaboHlanga uNxele uthe: “Kunetulo engakhelwa lona lokungiketula eliqale ngowezi-2015 lapho obunye ubuholi boMnyango babubona ukuthi sengingasebenza ngibe inhloko kuzwelonke. Kwakhiwa iphephandaba i-Asikhulume elalishicilelwa kanye ngenyanga, kulo lonke ushicilelo kwakukhulunywa ngami. Yaqhubeka yasala insila ngowezi-2017 lapho kuphinda kuvela isikhala ePitoli abanye bethi angikhuphuke ngiyobamba iqhaza. Manje ngowezi-2020 sekuphoqwa nalaba ebengisebenzisana nabo ukuthi bangijikele bangininde ngezinto engingazenzanga, baphinda basatshiswe nangokuthi ngeke ngiphinde ngibuyele emsebenzini wami.”
Uthi ngowezi-2017 wayethukwa “kwaze kwaqagulwa ukuthi sekuseduze ukuthi ngiziqathakele”. Lapho uthi babeqagula ukuthi uzozesulela kulesi sikhundla.
Uthi sekuze kwaba amahlandla amabili kukhona abathi angahola kangcono kuzwelonke. “Lokho sekungidalele izitha eziningi kwaba nomkhankaso wokuthi kufanele ngingabi bikho eMnyangweni. Netulo lokuthi ngingabi bikho emsebenzini njengoba izinkantolo zithe angibuyele emsebenzini nomlamuli enqabile ukuthi sinwetshwe isikhathi sokumiswa kwami. Ngakhelwa ngabantu ebengisebenza nabo baqambe amanga ukudicilela phansi igama lami ukuze ngikhishwe,” kusho uNxele.
Uthe ngeke awagagule amagama abantu abayingxenye yalokhu ngoba abanye abasekho kuHulumeni naseMnyangweni kanti abanye izinto azibahambeli kahle.
Ebuzwa ukuthi akhona yini amaphutha ake wawenza okungenzeka ukuthi labo abasola ngokumakhela uzungu babambelela kuwo uthe: “Senginemnyaka engaphezu kwama-30 kulo Mnyango. Ngiqale ukuthweswa amacala angekho ngowezi-2016, amacala empi agcine engayanga ndawo. Kwaphinda ngowezi-2018 ngathweswa amacala okungichitha futhi agcine ephumelelile ngoba ngixoshiwe ngoNcwaba nyakenye okuthe kamuva kwatholakala ukuthi amacala awekho emthethweni ngabuyiswa ngoZibandlela nyakenye. Bangichitha ngingekho kule nkantolo yabo yasehlathini. Anginawo umlando wokungaziphathi kahle emsebenzini, anginawo umlando wokuqula amacala ngaphandle kwalawa okunenjwa.”
Uthi amiselwe kona manje kuthiwa yena nekomiti lakhe kunezinqumo abazithatha bengalandelanga imigomo.
Uqhube wathi manje sekunxenxwa sakuphoqa abantu asebenza nabo ukuthi baphendulwe izitha zakhe.
“Umlando ukhomba ukuthi sasebenza kahle sifukula uMnyango kulesi sifundazwe saze saqhwakela phezulu uma kuqhathaniswa nezinye. Sekunabantu abaphoqwayo ukuthi baqambe amanga. Nginethemba lokuthi iqiniso lizovela,” kusho yena.
UNxele uthi uhlukumezeke kakhulu njengoba ahlaliswa ekhaya ngokungemthetho ngowezi-2019 waphinde waxoshwa wahlala izinyanga ezine-4 engaholi. “Lokhu kwaphenywa kwatholakala ukuthi akukho emthethweni iPublic Service Commission eyathula umbiko onezinto ezatholakala nezincomo kuNgqongqoshe woMnyango uLamola ngoMfumfu nyakene, lowo mbiko waholela ekutheni uNgqongqoshe athi angibuyiselwe emsebenzini,” usho kanje.
INkantolo Enkulu kwelomshwalense wokulahlekelwa ngenxa yombhedukazwe
Uthi kube khona imizamo yangaphakathi yokumelana nesinqumo sikaNgqongqoshe. Uthi izinkatolo zithe noma ngabe uyaphenywa kepha kumele abuyiselwe emsebenzini. “UMehluleli osingethe icala lami wenqabile ukuthi ngimiswe. Esikubona sekwenzeka kuthathwe izisebenzi eziqhamuka kwezinye izifundazwe behlome bezingovolo, bephethe lonke uhlobo lwezibhamu, bezovimba umuntu ongaphethe ngisho i-okapi. Ngokuba khona kwalaba lapha kudla uMnyango izinkulungwane ezingaphezu kwezingama-R200 ngesonto ngoba bahlala ehhotela likanokusho, bafana nabantu abaseholidini elikhokhelwe, kuxhashazwa imali yabakhokhi bentela. Kuyangikhathaza mina nozakwethu kwezinye izifundazwe ukuthi nalo Mnyango ngabe usuqunjwa phansi yini ngoba siyazi ukuthi kuneminye evuswayo njengoba sikhuluma nje iwile.”
Uqhuba athi: “Lesi senzo sokungalandeli umthetho, sokungahloniphi izinkantolo, sokungahloniphi abalamuli, sokubukela phansi amalungelo ami njengeMeneja nokusetshenziswa budedengu kwezinsiza kuzowisa uMnyango. Kukhona kumina ukuthi uMnyango uzulelwa amanqe. Okuzokwenza ungakwazi ukusebenza kuzobe kuyizenzo zomuntu owuphethe obonakala engawuphethe ngendlela.”
Uveze ukuthi udaba lokumiswa kwakhe uselubikile kuNgqongqoshe uLamola uselinde yena ukuthi aluxazulule. Uthe usalinde uMnyango ukuba umnike yonke imininingwane namacala ofuna ukumthwesa wona ukuze aqhubeke nohlelo lokubhakana nawo ngaphakathi.
Uphethe ngokuveza ukukhathazeka kwakhe kokunikwa kukaMnu uJames Smallburger, obebambe esikhundleni sakhe, inkontileka yonyaka nakuba esethathe umhlalaphansi.
“Kunabaphathi boMnyango ababili abese bezothatha umhlalaphansi abacela ukuthi baqhubeke basebenze ngoba bezizwa besanamandla kodwa banqatshelwa. Umbuzo uthi imali ayiholayo iphumaphi ngoba nami ngiyahola phela njengoba ngihleli ekhaya?” kuphetha uNxele.
nguSiyethaba Mhlongo Oct 23, 2020